#Chelsea iyo Manchester United; Horudhac, wararka kooxda iyo Halka Aaad Ka daawan Karto - Get Latest News From Horn of Africa
By axadle On Oct 20, 2018 Last updated Apr 2, 2019
Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhawanaysa kooxda uu macalinkoodii hore ee Jose Mourinho hogaaminayo ee Manchester United kulanka ka tirsan todobaadka 9-aad ee Premier league waxayna labada kooxood kulankan iskeenayaan iyaga oo ku jira laba xaaladood oo gabi ahaanba kala duwan.
Chelsea ayaa kulankan iskeenaysa iyada oo ku jirta xaalad caafimaad qab iyo kalsooni buuxdaa ku dheehan tahay kadib markii ay noqotay kooxda kaliya ee Premier league ka ciyaarta ee aan ilaa hadda xili ciyaareedkan wax guuldaro ah soo arag tartamada oo dhan.
Chelsea ayaa haysata 20 dhibcood oo Premier league ay kaga soo shaqaysatay siddeedii kulan ee ugu horeeyay waana 6 guulood iyo 2 barbaro ah iyada oo si wada jir ah dhibco ula wadaagta kooxaha Liverpool iyo Manchester City, waana kulan muhiimad khaas ah u leh saddexda kooxood ee kaalinta kowaad isku haysta.
Laakiin Manchester United ayaa kulankan iskeenaysa iyada oo walwal badani haysto kadib markii ay 13 dhibcood ka soo heleen siddeedii kulan ee Premier league ugu horeeyay waxayna Red Devils garoonka Stamford Bridge imanaysaa iyada oo kaalinta 8 aad kaga jirta miiska kala saraynta horyaalka Ingiriiska.
Jose Mourinho ayaa dib ugu soo laabanaya Stamford Bridge oo kulankiisii ugu horeeyay ee Man United uu ceeb wayn kala soo kulmay wuxuuna markan rajaynayaa in uu natiijo fiican ka soo helo inkasta oo uu walwal badan ka qabo in ceeb kale oo dhabar jab ahi ay ka soo gaadhi karto kooxda uu Sarri horumarka fiican ku sameeyay.
Manchester United ayaa ilaa kaalinta 11 ee Premier league u dhici karta haddii ay guuldaro kala soo laabto Chelsea isla amrkaana ayna guuldaraysan kooxaha Watford, Leicester City iyo Everton, waana arinta ugu xun ee ay jamaahiirta United ka cabsi qabaan in kooxdoodu ah sii quusto miiska kala saraynta Premier league.
Sidoo kale haddii ay Chelsea guuldaraysato waxay lumin doontaa cadaadiskii xooganaa ee ay ku haysay kooxaha Manchester City iyo Liverpool kuwaas oo rajaynaya in kooxda Sarri ay dhibco lumiso isla markaana ay guulaystaan kulamada ka sahlan kulanka Stamford Bridge ee ay ciyaari doonaan.
#Philippe Coutinho”Waa Uu Qalbi Jabey” Inkastoo…
#Inter Oo Racdeysay Macalin Spalletti waxyar ka hor markii…
Tartanka: Kulanka 9 aad ee Premier League
Kulanka: Chelsea Vs Man United
Waqtiga: 2:30 Saacada Barriga Afrika
Garsooraha: Mike Dean
Ka Daawo: axadledirect.com
#Sariirta ay habeenka ugu horreeya ku seexato gabadha…
3 hours ago 7,855,970
#Trump oo Weerar afka ah ku qaaday Sadiq Khan
3 hours ago 339,702
#Xaaska raysul wasaare oo qiratay in ay si qaldan u…
3 hours ago 369,849
#Kenya oo Bilowdey in ay xagxagato UK iyo Norway Markii ay…
3 hours ago 369,982
Jun 16, 2019 37,000
#Despite closing the border Kenya is…
Jun 16, 2019 785,602
#Xulashaddii Ergeyga Qaramadda Midowbay…
Jun 16, 2019 788,578
Maamulka Kismaayo oo u hanjabtay dadka…
Jun 16, 2019 37,005